Fanabeazana lalao ho an'ny ankizy an-tserasera - hilalao afaka amin'ny Lalao - Lalao
Fanabeazana lalao ho an'ny ankizy an-tserasera
Ny olona dia tsy maintsy tapaka hanatsara sy hanampy azy maimaim-poana amin'ny aterineto lalao mba hananana. Na dia tsotra toy izany kilalao, toy ny noughts sy lakroa, misy mety. Ianao mitady handresy foana rehetra izao fandrosoana sy tsianjery azy hampihatra ny manohitra ny fanafihana. Ny hafa indray manolotra fahafinaretana milalao zavatra miafina, correspondences sy ny tsy fitovian-tsiroaroa. Dimy ambin'ny folo piozila ary lasa soratra ny lalao, ary namorona be dia be ny dikan-mampientam-po. Classic piozila sy manao zavatra vaovao Smart asa mba hitady ny valiny. Ny ankizy azo fiofanana azy hanoratra, manisa, hamantatra feo, loko, anarana sy ny endrika.
mitapy izany Math
tsy misy teboka
Lalao Ny Fanabeazana tamin'ny Category:
Farany Fanabeazana lalao ho an'ny ankizy an-tserasera
Sambory ny karatra
Indroa! Tadiavo ny duplicate
YooHoo mankany amin'ny piozila Jigsaw Rescue
Boky fandokoana sariitatra ho an'ny biby an-jaza
Lalao Online Rehetra Fanabeazana lalao ho an'ny ankizy an-tserasera
Fanabeazana lalao ho an'ny ankizy an-tserasera ho tia ny ankizy, noho izy ireo be dia be mahafinaritra hafanam-po sy ny endri-tsoratra. Rehefa falifaly, ny zaza aza dia tsy mahatsapa fa mampifandray famoronana mpanazatra mieritreritra, lojika, ny fianarana mba manisa, manavaka loko ny habeny. Ireo lalao ihany koa ny mandray anjara amin'ny fahalalana ny tsara sy ny ratsy, dia ampianarina mba manaiky ny manan'aina na tsy manan'aina zavatra. Ity kilalao tsara izay ray aman-dreny Tsy tokony hatahotra ny zanany ho ratsy taomina hiova hevitra. Toerana tena sariitatra litera tokoa no manatrika ao ny foto-kevitra mahafinaritra ity, ary handresy ihany no ho fantatra sy manintona kokoa. Masha sy Dora dia mitady ankizy zavatra, manangona vola madinika, ny kintana sy ny fo. Mba hanaovana izany, dia tsy maintsy ho mailo sy fandinihana, ny tsy hanapaka iray tsipiriany sy hanangona singa rehetra ilaina. Izany dia hameno ny lalao kaonty sy handefa ny maro ny fanendrena vaovao.
ny fanabeazana ny ankizy lalao maimaim-poana amin'ny aterineto karapuzov mampianatra taratasy, ary efa mahaliana ny mahatsiaro, dia ilaina ny mahita azy ireo tao an-tanàna misy azy ireo. Izany no asa fanampiny iray mba hikarakara, izay diversifies ny gameplay. Crafty bukovki toy izay nanova tarehy ny tenany ho loko afara ny hazo, ny rahona, sy teo akaikin'ny trano. Ny sasany mody fefy, ny hafa swinging amin'ny sampana sy mampiray hazo sy ny ravina maitso. Ireto ambany ireto ny varavarana lamba ianao dia afaka mahita izay bukovki efa nahita, ary inona no mbola ho. Undiscovered marika in mavo, ka izany dia mora kokoa ho an'ny mpilalao mba hitady izay tsy ampy. Noho izany, nandritra ny nisafotofoto fahafinaretana tokoa ny tsindrio eo ny taratasy rehetra, fa hahatsiaro ny abidy, miezaka ny hitady azy ireo mba. Izany dia manasarotra ny asa, fa mora kokoa ny mitadidy ny abidy, izay ilaina any am-pianarana. Rehefa miaraka amin 'ny tsara renitantely fiarandalamby fitadidiana sy ny fikarakarana izany, manaraka izay dia nafeniny tohotra. Ny dingana ny fampivelarana-tserasera lalao ho an'ny ankizy dia mitovy toy ny tamin'ny lalao momba ny thimbles, raha ny baolina miafina eo ambany ny iray tamin'izy ireo, nanaraka ny nisafotofoto hetsika sy ny mpilalao tsy maintsy maminavina izay nanafina ny zavatra. Mba tsy hanapaka ny renitantely, trano, tena mafy mijery ny fomba manova ny toe-draharaha eo amin'ny milalao an-tsaha. Miaraka amin'ny ankizy saka maka lesona matematika vitsivitsy, ny fandaniana sy ny subtraction koa, fampitomboana sy ny fizarana, ary roa-tsotra tarehimarika isa.
hafa Fampianarana Games
Ny lalao mandeha ara-potoana, ary zava-dehibe ny kajy haingana ny vokatry ny matematika ohatra, ny safidy mba milaza ny marina amin'ny alalan'ny fisafidianana izany valiny avy ireo natolotra ao amin'ny rahona. Tany am-piandohana, alohan'ny hanombohanao, mifidy ny matematika famantarana tianao hampiasaina mandritra ny fanapahan-kevitra sy ny ohatra rehetra dia ho natolotra sy ny fampiasana.
Ary ny ankizilahy tia ny lalao mpamorona, izay piesy dia hanampy ny fiara. Vonona-voatsoaka teny an-ny sary, ary dia ilaina ny hanolo ny singa rehetra izay tsapaka niely manodidina.
dia hisarika ny ankizy kilalao amin'ny pensilihazo mampidi-doza. Ao amin'ny kianja baolina miolakolaka mitoetra ary dia ilaina ny rotate toa ka fa nanakodia, fa lavo tamin'ny maranitra crayons fa tsy triatra.
Ny mampihomehy cubes hanao trano, manangona azy avy ny sombintsombin'ny mofo, solon'i tsirairay ny habeny. Beautiful, mamirapiratra, mozika lalao voly tanora Gamers, manolotra ny foto-kevitra isan-karazany sy ny lohahevitra.
Ao amin'ny hazakazaka dia ilaina ny mifehy ny milina, ka mitantana eo amin'ny sakana sy ny fanangonana zavatra.
Ary amin'ny virtoaly-dakozia dia mahandro sakafo maraina ny matsiro, ary io asa io dia hahaliana ny ankizivavy.
Mety ho liana amin'ny Fitafiana sy ny fandokoana boky, Puzzles hihaona ao ny maha sary, raha soloina izay tsy ampy eo amin'ny sary. Indraindray izany dia hanan-javatra mba hisambotra sy nitifitra teo, mifehy litera kilalao.